Jen Andry Rakotondrazaka : Voatendry ho kaomandin’ny CIRGN Antananarivo -
AccueilSongandinaJen Andry Rakotondrazaka : Voatendry ho kaomandin’ny CIRGN Antananarivo
Maro ireo fanendrena nivoaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, izay notontosaina ny faha-11 ny volana aprily 2018, ary ny teo anivon’ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimaria no maro tamin’izany. Jeneraly miisa valo ohatra no notendrena tamin’ izany miampy kolonely miisa enina amby enimpolo, izany hoe raha atambatra dia nahatratra efatra amby roapolo ny fanendrena vaovao. Ho an’ny eo anivon’ny fibaikoana ohatra dia nisy ny fanendrena ny lefitra voalohany ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny lefitra faharoa ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ary ny lehiben’ny etamazaoron’ ny kaomandin’ ny zandarimaria. Ho an’ny fanendrena eo anivon’ny fari-piadidian’ny zandarimaria kosa dia saika nisy fanendrena vaovao avokoa manerana ireo faritany enina noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra, teo ny fanendrena ny kaomandin’ny fari-piadidin’ny zandarimaria avy eto Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga , Antsiranana, Tomasina ary Toliara. Nahitana izay fanendrena vaovao izay ihany koa ny teo anivon’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena, dia teo ny fanendrena ny kaomandin’ireo sekolin’ny zandarimariam-pirenena sy ny kaomandin’ny sekoly ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra.
Taorian’ny fahabangan’ny toeran’ny kaomadin’ny Fari-piadidian’ny zandarimaria eto Antananarivo noho ny ny fanendrena ny Jeneraly Andrianjanaka Njato Arisoa, izay nitazona io toerana io teo aloha ka voatendry ho kaomandin’ny zandarimariam-pirenena vaovao , dia ny jeneraly Andry Rakotondrazaka indray izany izao no lehiben’ny CIRGN eto Antananarivo. Tsiahivina moa ny toerana izay notazonina teo alohan’ izao fanendrena izao, dia ny naha talen’ny ATT azy. Vao tamin’ ity herinandro ity ny tenany no niresaka tamin’ny mpanao gazety, fony izy tale jeneralin’ ny ATT. Raha tsiahivina kosa ny tantara dia efa tsy zoviana amin’ ny besinimaro intsony ny jeneraly Andry Rakotondrazaka, satria dia efa kaomandin’ ny vondron-tobim-pileovana Analamanga ny tenany ny taona 2010, ary hita taratra tamin’ny fandaminana ny teo anivon’ny EMMO izay tamin’izany fotoana izany. Anisan’ny nahazo fanendrena amina toeram-pibaikoana vaovao ihany koa kolonely Ravoavy Zafisambatra, izay lasa talen’ny filaminana sy ny fanangonam-baovao eo anivon’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena. Ny kolonely Ravoavy Zafisambatra moa izay hita ihany koa teo anivon’ny CIRGN teto Antananarivo.